တစ်ခါတစ်ရံတွင်တစ်ခုခုအောင်မြင်ရန်ဖို့ရည်မှန်းချက်ကိုသတ်မှတ်ထားသောလူတစ်ဦးရဲ့ဘဝအတွက်ကတပ်မက်လိုချင်သောအအောင်မြင်ရန်ခွန်အားနှင့်စွမ်းအင်ရှိသည်မဟုတ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ စိတ်ပညာရှင်ကဤဖြစ်စဉ်၏မရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်ကိုခေါ် အောင်မြင်မှုအောင်မြင်ရန်လှုံ့ဆျောမှု ။ တစ်ခုချင်းစီကိုလှုံ့ဆျောမှုကလူ့အမြင်, မိမိကိုမိမိနှင့်အခြားသူများမှသဘောထားကိုနှစ်ဦးစလုံးအဖြစ်စဉ်းစားတွေးခေါ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်နေသည်။ သငျသညျဤလောကနှငျ့သူတို့ရဲ့ပုံမှန်အမြင်များ၏အခါလေ့လာမှုကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာထို့ကြောင့် - အခြားအတွေး, သင်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုမှအသစ်တခုသဘောထားကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နှင့်သင်နောက်ထပ်ဒီရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်မည်သို့နားလည်ကူညီပေးသည်။
ငါရည်မှန်းချက်ကိုကြည့်ပါ - ငါအတားအဆီးမမြင်မိပါဘူး။
သင်ပိုမိုအောင်မြင်သောအခါသင်၏အသက်တာ၏ကာလမှတ်မိဖို့ကြိုးစားပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင်သူကရေးချပါ။ အခုသင်ကပြီးတော့ခဲ့သကဲ့သို့အောင်မြင်သောမဖွစျနိုငျသမြှကိုအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါ။
အသေးစိတ်အတွက်သင်ယခင်ကဖော်ပြထားရည်မှန်းချက်ရောက်ရှိသောအခါယခုအချိန်တွင်ရှင်သန်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ခံစားခဲ့ရသောအရာကိုအာရုံစိုက်။ သင်သည်သင်၏အသက်တာ၌တရားယခုကဲ့သို့ခံစားရနိုင်ရန်အတွက်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာလဲ?
သင့်ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်အတွက်ပျြောမှေ့စခံစားချက်တွေကိုရွေ့လျားကြိုးစားပါ။ တကယ်တော့, သင်သည်အဘယ်သို့ယခုလုပ်နေတာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်တိကျတဲ့တစ်ခုခုအောင်မြင်ရန်ဖို့ကြိုးစားနေသည်။ ယခုသင်တို့ရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုရန်သင့်အတိတ်အောင်မြင်မှုအချိန်တွင်အပြည့်အဝကွခညျြနှောငျဖို့လှုံ့ဆော်မှုရှာကြလော့။
တိကျစွာပန်းတိုင်အောင်မြင်ရန်ဘယ်လောက်လျင်မြန်စွာသူတို့ကိုယ်သူတို့များအတွက်နားလည်ရန်အလို့ငှာ, စက္ကူတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းအပေါ်ယခုအချိန်တွင်သငျသညျကိုလွှမ်းမိုးသမျှသောအငြင်းပွားမှုများ, ခံစားခကျြမြားနှငျ့အတှေ့အကွုံချရေးပါ။
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအောင်မြင်မှုတစ်ခုဒိုင်ယာရီသိမ်းဆည်းထားပါ ။ အသေးစားနှင့်သင့်အသက်တာ၌တစ်ကွေ့အချက်နှင့်အတူအဆုံးသတ်အနေဖြင့်အထိမဆိုအောင်မြင်မှု၏စံချိန်တင်ထားပါ။
သငျသညျ ပို. ပို. အကြိမ်တိုင်းတက်နွေးလိမ့်မည်ဟုဖတ်နေ, အကြံပြုချက် - စာသားမဖန်တီးပါ။
ပန်းတိုင်ကိုသတ်မှတ်, အောင်မြင်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာသင်အမှားဆီသို့သင့်ရဲ့သဘောထားကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းသတိရပါ။ တစ်ဦးအပြုသဘောထုံးစံ၌သူတို့ကိုဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုလေ့လာပါ။ ကျရှုံးခြင်းမကြောက်ပါနှင့်။ မည်သည့်အခွအေနေကနေမအောင်မြင်, သငျသညျသင်ခန်းစာနှင့်အပြစ်တွေသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးအမှားလုပ်ရင်တောင်သူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်မတင်ကြဘူး, တစ်ခုခုများ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက်ပျက်ကွက်ကြုံတွေ့ကြသည်။ တက်ကြွသောလူသူတို့ကိုဝန်ခံဖို့ကြောက်နေကြတယ်သောသူထက်အများကြီးပိုအမှားတွေရောက်ရှိဖို့ကစိတ်ထားပါ။ ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးအကိုပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်မှာတစ်ချိန်တည်းမှာလိုချင်သောရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်။
ဒါဟာဘာလဲဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ - လေးလည်း?
အလုပ်လုပ်အချိန် concept နှင့်အမျိုးအစားများ
အိပ်ရာမှတဆင့်အလုပ်ရှာဖွေရေး - အဲဒါကိုတန်ဖိုးရှိပါသလဲ
ဖောက်သည်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်ရန်အတွက် Marketing ကိုရွေ့လျား
အနာဂါတ်အလုပ်အကိုင် - ထိုအလုပ်အကိုင်အနာဂတျမှာလိုအပ်ပါလိမ့်မည်ဘာလဲ?
Copywriting - ဘယ်လိုစတင်ရန်?
အကြောင်းတရားများနှင့်နည်းစနစ်များကြောင့်နှငျ့ဆကျဆံရာတှငျများ - ငွေဖောင်းပွမှုဆိုတာဘာလဲ
ဒယ်အိုးအတွက် Battery ကိုအတွက် Pollock
ကြက်ဥမပါဘဲဒိန်ချဉ်အပေါ် pancakes - တစ်အရသာ Home-ချက်ပြုတ်စားသောက်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
Long က guipure စားဆင်ယင်
ထိုဒေသတွင်လူကြိုက်များရွေးချယ်စရာ Arbore ၏ရှုခင်းသို့ fit ကိုဘယ်လို - ဒီဇိုင်းများရှုခင်းကြည့်အဆောက်အအုံငယ်?
မီးဖိုချောင်ထဲမှာသင်ကူညီပေးရန် 32 ဖန်တီးမှုအကြံပေးချက်များ
စတော်ဘယ်ရီပေါ်ပိုး - ဘယ်လိုစစ်တိုက်ခြင်းလော
© 2020 my.unistica.com